पनौती अप्डेटः प्रहरी माथी गोली चल्यो, कस्ले गोली चलायो ? – Radio Roshi
पनौती अप्डेटः प्रहरी माथी गोली चल्यो, कस्ले गोली चलायो ?
पनौतीमा टिपरले ठक्कर दिएर आमा छोरीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर झडप हुँदा एक प्रहरीलाई गोली लागेको छ । भने दुई स्थानीयलाई गोलीको छर्रा लागेको छ । मिन बहादुर थापाको गोडामा ढुंगाले लागेको छ । पनौतीमा आज अपरान्ह ४ः३० बजे टिपरले ठक्कर दिएर दुई आमा छोरी (खानीखोला गाउँपालिका वडा नं १ की ३३ वर्षीय जुनी मायाँ गोले र उनकी छोरी ३ वर्षीय स्मारीका गोले) को मृत्यु भएपछि बसपार्क क्षेत्रमा स्थानीयले प्रदर्शन गरेका थिए ।
सोहि भिडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास र हवाई फायर गरिएको थियो । सोहि क्रममा प्रहरी दिलिप बुढाथोकीको देब्रे पातोमा गोली लागेको छ भने स्थानीय हर्कबहादुर लामा र सरदलाई गोलीको छर्रा लागेको छ ।
झडपमा परी घाईते भएका २ प्रहरी र ३ स्थानीयको शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीयहरुले दोषि चालकलाई कारवाहीको माग गर्दै नाराबाजी गरिरहेका छन् । आमाछोरीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीय र आफन्तले पनौतीमा प्रदर्शन गरेका हुन् । झडपमा थुप्रै स्थानीय घाईते भएको जनाईएको छ ।